रानीबारी हत्याकाण्डका दुई अभियुक्तलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय - बिसाउने चौतारी
हामी सबैलाइ जाेड्ने एउटै माध्यम
Home राष्ट्रिय रानीबारी हत्याकाण्डका दुई अभियुक्तलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय
रानीबारी हत्याकाण्डका दुई अभियुक्तलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय
मेराे चाैतारी Wednesday, July 12, 2017 राष्ट्रिय,
झण्डै १४ वर्ष अघि भएको रानीबारी हत्याकाण्डमा संलग्न मनराज र प्रमेश दुई वर्ष अघि पक्राउ परेका थिए । प्रहरीका अनुसार दुबै ‘कन्ट्राक्ट किलर’ हुन् । हत्याकाण्डका योजनाकार भने अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले रानीबारी हत्याकाण्डका दुई अभियुक्तलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीश रमेश प्रसाद रिजालले एकल इजलासले बुधबार मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहानलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
के हो रानीबारी हत्याकाण्ड ?
काठमाडौंको रानीबारीमा इन्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी पत्नी अञ्जली श्रेष्ठको ०५९ असार ३१ गते खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा मनराज र प्रमेशले पैसा लिएर हत्या गरेका हुन् । तर, उनीहरुको ‘टार्गेट’ भने श्रेष्ठ दम्पती नभएर घरबेटी गीता खड्का थिइन्, जो म्यान पावर व्यवसायी थिइन् ।
गीताको हत्याका लागि सुपारी लिएको मनराजको समूहले हेमन्त र अञ्जलीको हत्या गरेका थिए । उनीहरुले श्रेष्ठ दम्पतीकी सात वर्षकी छोरीलाई पनि खुकरी हानेका थिए । तर, उनी बाँच्न सफल भएकी छन् । मनराज र प्रमेशले घरबेटीको पनि हत्या गर्न खोजेका थिए तर गीता शौचालयमा लुकेका कारण बच्न सफल भएका थिइन ।
Tags # राष्ट्रिय
About मेराे चाैतारी
By मेराे चाैतारी at Wednesday, July 12, 2017
सक्छौ जागिर नखाऊ, सक्दैनौ जागिर खाऊ । झन्डामुनि बस, तर दरबार कहिल्यै नपस । काजी जसपाउ थापा जब मानिस जागिरमा जान्छन् तब तिनले आफ्नो म...
Transsexual Sex Reassignment Surgery (male to female) of Prateek Panta (Ketlin) हिजोसम्म उनी प्रतीक थिए, कलाकार सन्तोष पन्तका कान्छा छोरा। ...
Timlai Dine Maya/New Latest Nepali Cover Video Song 2074/2017
विवाह नै नगरी विधवा, ९० लाख क्षतिपूर्ति !
काठमाडौं । एक सेकेन्ड पनि पतिसँगै देखभेट नगरी हकदारका रुपमा ९० लाखभन्दा बढी रकम बुझ्दा नन्दनी माली अचम्ममा परेकी छन् । रुपन्देही श...
सरकारले चीनलाई गैंडा उपहारमा दिने
सरकारले चीनलाई उपहारमा दिने गैंडा समात्न सुरू भएको छ । शनिबार चितवन निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र देविताल खारिया मुहान क्षेत्रमा एउटा भाल...
अन्तराष्ट्रिय कथा कविता कविता/गजल खेलकुद गृहपृष्ठ जानकारी निबन्ध नेपाली अडियो गीतहरु नेपाली भिडियो प्रेम पत्र फिल्म भनाईहरु राशिफल राशीफल राष्ट्रिय वलिउड/हलिउड विज्ञान/प्रविधि समाचार